Kazakhstan: Mikapoka ny biraom-paritry ny fiarovana nasiônaly ny fanapoahana baomba famonoan-tena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2019 12:48 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny May 2011)
Tranga voalohany tamin'ny fanapoahan-tena tany Kazakhstana ity, firenena iray fantatra amin'ny fandeferany ara-poko sy ny fahamarinan-toerana ao anatina faritra sarotra ao Azia Afovoany. Toa hoe niezaka ny hiditra tao amin'ny firenena ireo mpanao an-tendro ary nitatitra ny fisamborana vondrona mpanao heloka bevava akaikin'ireo fikambanana mpanao an-tendrony ara-pinoana toy ny Hizb-ut-Takhrir, sy ireo vondrona islamista tsy nentim-paharazana ireo manam-pahefana Kazakha.
Kianin'i Megakhuimyak [teny rosiana] ireo manampahefana ho nampiasa ny modely “sosialisma polisy” tamin'ny politika, izany hoe, ny tetika fanodinana ny saim-bahoaka tsy ho amin'ilay ady politika mandalo amin'ireo andrim-panjakana fehezin'ny fanjakana:
Efa im-betsaka [ny governemanta] no nomena fampitandremana tsy hilalao an'izany, fa tsy nihaino izany mihitsy izy ireo, ary ankehitriny dia ananany ny kamikazy voalohany […] Tsy milay be ve izany? Nahoana ireo manampahefana no tsy nanomboka nanamarina ireo imams [islamika mpitarika] folo taona lasa izay, sy nitsahatra tsy hifampitositosy tamin'i Pakistana sy Arabia Saodita? Tsy manana baolina sahaza intsony isika ankehitriny mba hanaovana [fanentanana] midadasika hanoherana ny mpampihorohoro
Mampatsiahy [ros] mikasika ny fototra ekstremista ananan'ny faritra Aktobe i Epolet:
Ny 24 Septambra 2009, olona enina tao an-toerana no nohelohin'ny Fitsarana ao Aktobe hifonja 12-17 an-tranomaizina noho ny asa fampihorohoroana. Nikasa ny hanafika ireo vahiny mpampiasa vola amin'ny solitany izy ireo.
Mahatsiaro [ros] ihany koa i Promodj fa:
tsy ela akory izay, hoy ry zareo tao anatin'ny vaovao mikasika ireo tobim-pampihorohoro tany Andrefan'i Kazakhstana. Nisy hetsika niraisan'ireo sampandraharaha manokana Rosiana sy Kazakhs […] Raha toa ka hetsika fampihorohoroana io, sarotra ho an'ireo manam-pahaefana ny hanaiky izany, raha ireo mpampihorohoro indray nampiseho hoe vitan’-dry zareo ny nikarakara fanapoahana teo akaikin'ny biraon'ny Kaomitin'ny Fiarovana Nasionaly izay mazava ho azy fa mampitombo ny ahiahin'ny mponina.
“Mihorohoro i Aktobe. Toa tsy namela ilay kamikazy hiditra tao anatin'ilay tranobe hono ilay polisy am-perinasa ary teo amin'ny fidirana no nipoaka ilay baomba. Mikorontana ny tanàna iray manontolo, eny rehetra eny ny polisy manao sakana”,hoy i danik-akpan mitatitra [ros] avy any Aktobe.
Manoratra i Gulim Amirkhanova avy amin'ny tranonkalan'ireo haino aman-jerin'olon-tsotra newreporter.kz [ru]:
Rakhimzhan Makhatov, 25 taona, kamikazy mponina ao Kazakhstana no nanatanteraka ilay fipoahana tamin'ny 10 ora maraina . Maty izy […] mamerina rohy iray mankany aminy ny fikarohana ety anaty Aterineto, tatitra iray mikasika ny sekoly fianarana mozika ao Aktobe ary mikasika an'i Makhatov ho toy ny mpianatra manan-talenta: “Tamin'ny 2001, nahazo loka voalohany tamin'ny ‘Zhas Kanat’, fifaninanana mozika izy”.
Somary milona ny fifampiresahana eo amin'ny Twitter ampiasàna ireo tenifototra #aktobe sy #vzryvkz. Mavitrika kokoa ireo mpampiasa Facebook, manao fampitahana amin'ilay fipoahana vao haingana tany Minsk [Bielorosia] ary mampatsiahy fa fantatra noho ireo fironany amin'ny radikalisma tsy mitsahatra mitombo i Kazakhstana andrefana.
Misalasala [ru] i Poops:
Hafahafa ny hoe nanafihany ny Kaomitin'ny Fiarovana Nasionaly … Matetika, ny hampitahotra ny vahoaka tsotra amin'ny fanapoahana ireo fitateram-bahoaka, ireo kianja na toerana hafa fivezivezem-bahoaka no tanjon'ireo mpampihorohoro. Amin'ny ankapobeny dia hita toy ny valifaty atao amin'ny fitondràna noho ireo hetsika tsy rariny na tsy ara-dalàna sasany ireny fipoahana atao any amin'ireo toeram-piasan'ny solotenam-panjakana ireny.
“Nanapoaka ny tenany mba hialàna amin'ny fandraisana andraikitra rehetra i Makhatov izay nampangaina ho nanao hetsika fandikandalàna maro tamin'ny naha-mpikambana tanatina vondrona mpanao heloka bevava vita tetika azy” hoy [ros] ny mpitondra tenin'ny biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana
Nomelohan’ny filohan'ny OSCE, i Audronius Ažubalis, ilay famonoan-tena amin'ny baomba notondroiny ho toy ny “hetsika fampihorohoroana”.
Hajiantsary ahitana ny fanevan'i Kazakhstana avy amin'ny mpampiasa Flickr SonnyandSandy (CC BY-NC-ND 2.0).